Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Fraport mametraka am-pahombiazana ny olan'ny fifamatorana
Ny totalin'ny laharana 1.15 miliara euro dia manome an'i Fraport hanana fahalalahana bebe kokoa amin'ny lafiny ara-bola
Ny fatorana Fraport dia ho voatanisa ao amin'ny tsena voafehy ao amin'ny Stock Exchange Luxembourg
Ny tranche voalohany misy volavola 800 tapitrisa € dia manana fe-potoana fito taona
Ny tranche faharoa miaraka amin'ny volan'ny € 350 tapitrisa dia navoaka hanondrotana ny fatorana efa navoaka tamin'ny 2020 izay matotra tamin'ny Jolay 2024
ankehitriny, Fraport AG nametraka fifamatorana orinasa miaraka amina totalin'ny € 1.15 miliara ary noho izany dia iray amin'ireo fatorana orinasa lehibe indrindra tsy voamarina ao amin'ny Euro izay navoaka teo amin'ny tsena renivohitra. Voatosiky ny fangatahan'ny mpampiasa vola matanjaka, ny olana momba ny fatorana dia voamarika fa diso loatra, ka nahafahan'i Fraport nametraka ny fatorana tamin'ny toe-javatra tena tsara ho an'ny Vondrona. Tao amin'ny sampana roa no nametrahana izany. Ny tranche voalohany misy volavola 800 tapitrisa € dia manana fe-potoana fito taona. Ny tranche faharoa miaraka amin'ny volan'ny € 350 tapitrisa dia navoaka hanondrotana ny fatorana efa navoaka tamin'ny taona 2020 izay matotra tamin'ny Jolay 2024.
Ny vokatra isan-taona ho an'ny fifamatorana fito taona vaovao dia napetraka tamin'ny 1.925 isan-jato, miaraka amin'ny tapakila 1.875 isan-jato isan-taona. Ny vokatra isan-taona ho an'ny fitomboan'ny fatorana efa misy dia napetraka tamin'ny 1.034 isan-jato, raha ny tapakila isan-taona kosa dia mbola miova hatrany amin'ny 1.625 isan-jato. Ny habetsaky ny fatorana dia mizara ho antokon'ny € 1,000 avy.
Dr. Matthias Zieschang, Fraport AGny mpikambana ao amin'ny birao mpanatanteraka eo amin'ny sehatry ny fitantanam-bola sy ny fanaraha-maso (CFO), dia nilaza hoe: “Na eo aza ny tsenan'ny fifamatoran'orinasa be loatra tamin'ity herinandro ity - miaraka amina totalin'ny fifanakalozana 19 amin'ny zona euro hatreto dia manodidina ny € 13 miliara - nohamafisinay bebe kokoa toerana amin'ny toe-javatra tsara indrindra. Izahay dia efa nanangona vola mitentina € 1.9 miliara amin'ny famatsiam-bola vaovao mandritra ny telo volana voalohany amin'ny 2021 - ka manome antoka ny fahafaha-manao ara-bola tsara ho an'i Fraport. Miaraka amin'ny olan'ny fifamatorana anio, ny habetsaky ny vola alaintsika ary ny crédit azo antoka dia hitombo mihoatra ny € 4 miliara isaky ny faran'ny volana martsa 2021. ”
Novidin'ireo mpampiasa vola eran-tany eoropeanina sy mpanelanelana amin'ny varotra, ny fatorana Fraport dia ho voatanisa ao amin'ny tsena voafehy ao amin'ny Stock Exchange Luxembourg. Ny kaonsortium banky misy an'i BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK ary ny LBBW Bank dia niasa ho mpitantana iraisan'ny olana momba ny fifamatorana.
United Airlines dia manampy sidina vaovao mankany amin'ny toerana fialan-tsasatra amoron-tsiraka